တယ်လီဖုန်းတိုင်ပင်မှု - World Trade Exchange
တယ်လီဖုန်းနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ WTE သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်ရန်အတွက်သင့်အနေဖြင့်မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများ၊ သင်၏ပြsolutionsနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်များ၊ အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများ၊
အဘယ်ကြောင့် wte အတိုင်ပင်ခံ?
WTE အကြံပေးသူများသည် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများ၊ အမေရိကန်အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အကြီးမားဆုံးကာကွယ်ရေးကန်ထရိုက်တာများဖြစ်သည့် Lockheed Martin Corp. , Boeing Co. , General Dynamics Corp. , Northrop Grumman Corp. , Raytheon Co. , United Technologies ကဲ့သို့သောဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ McKesson ကော်ပိုရေးရှင်း၊ Leidos Holdings Inc. , Huntington Ingalls Industries Inc. , Harris Corp. , Humana Inc. , BAE Systems Plc နှင့်အခြားများစွာတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် UNCTAD၊ UNESCAP၊ World Trade Organization (WTO)၊ နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများ၊ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှအစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့်အခြား ဦး ဆောင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကြံပေးများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
သင့်အားအကန့်အသတ်မရှိအရင်းအနှီးနှင့်ရန်ပုံငွေရရှိခြင်း၊ လက်တွေ့ကျသောဖြေရှင်းနည်းများ၊ အောင်မြင်မှုများရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဆန်းသစ်သောနည်းဗျူဟာများ၊ အရသာကင်းမဲ့သောစီမံကိန်းများ၊ လျှောက်လွှာအခြေခံသည့်အသေးစိတ်ပုံစံများ၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်လမ်းညွှန်များနှင့်စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းများဖြင့်သင်ရှာဖွေနေသောတန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အခြေအနေအတိအကျနှင့်ကိုက်ညီသောရလဒ်များကို။ သို့သော်၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကြံဥာဏ်များ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်အာမခံထားသောရလဒ်များအတွက်အဖြေများကိုအကောင်းဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ထက်ပိုမိုဖြတ်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုနှင့် client များနှင့်အတူ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းခွဲ ၇၀၀၀ သည် နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကွန်ယက်ကို, WTE မည်သည့်စီးပွားရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စျေးကွက်တွင်မဆိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖြန့်ဖြူးသောလမ်းကြောင်းအသစ်များ၊ အကန့်အသတ်မဲ့အရင်းအနှီးကိုရယူခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းရလဒ်များကိုသင့်ကိုအကြံပေးများကပေးနိုင်သည်။
အဆင့် ၁။ ပြproblemsနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါ။
အဆင့် ၁ ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်အထိရောက်ဆုံးသောအဖြေကိုအကြံပေးများသည်သင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ချက်ချင်း၊ ပြည့်စုံပြီးလုံးလုံးလျားလျားပုံဖော်ခြင်းခံရလိမ့်မည် (ဥပမာအားဖြင့်နမူနာပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်နမူနာယူပြီး) ရှင်းပြချက် -
အနည်းဆုံးကွဲပြားသောရှုထောင့် ၄ ခုမှပါရာဒိုင်းများနှင့်အားသာချက်အချက်များမှမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း - စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပညာ၊ လျှောက်လွှာ၊ ပြproblemနာ၊ စိန်ခေါ်ချက်။
မည်သည့်စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ ပြproblemနာ၊ စိန်ခေါ်မှုကိုမဆိုသင်အကောင်းဆုံးရယူနိုင်ပြီးထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည် WTE အတိုင်ပင်ခံ။
အဆင့် ၁ ။ သင်အောင်မြင်လိုသောပန်းတိုင်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအသေးစိတ်ကိုတင်ပါ။
အဆင့် ၁ ။ WTE သင်၏စီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည့်သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်ရန်အတွက်အလွန်အသေးစိတ်ကျသောအောင်မြင်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ၊ turnkey- ညွှန်ကြားချက်များ၊ ရလဒ်သေချာမှုရှိခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ပြီးပြည့်စုံစွာအကောင်အထည်ဖော်မည့်အစီအစဉ်များကိုအကြံပေးများသည်သင့်အားပေးလိမ့်မည်။
သငျသညျအဆကြီးထွားမှုဒီဇိုင်း, နေ့ချင်းညချင်းအမြတ်အစွန်းမြှင့်တင်ရန်, စျေးကွက်လွှမ်းမိုး, သိသိသာသာဥစ္စာဓနကိုဖန်တီးမဆိုစီးပွားရေး, စက်မှုလုပ်ငန်း, ဒါမှမဟုတ်စျေးကွက်အတွက်ချက်ချင်းယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ရရှိနိုင်သည်။
အဆင့် ၁ ။ သင်အောင်မြင်မှုရရန်အခွင့်အလမ်းရှာရန်လိုအပ်သည့်စီးပွားရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်ပါ။
အဆင့် ၁ ။ WTE အမြတ်အစွန်းစင်တာများနှင့်ငွေသားစီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအရံအတားများနှင့်သင်နှင့်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်သည်။
သင်သည်“ အစစ်အမှန်ဘဝ” ဥပမာအားဖြင့်ပြည့်စုံသောအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုသရုပ်ဖော်ပုံများ၊ လမ်းညွှန်များနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်မှုများရရှိနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများနှင့်ချဉ်းကပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အသေးစိတ်အဆင့်များရရှိလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာနောက်လာမည့်အချိန်တွင်သင်သည်ခက်ခဲသော၊ အရေးကြီးသော၊ အရေးကြီးသောစီးပွားရေး၊ ဘဏ္financialာရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရောင်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြproblemနာနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါသင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့ပါ။
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဖိအားများကြောင့်ချွေးထွက်ထွက်သွားမည့်အစား၊ WTE အတိုင်ပင်ခံနှင့်အပန်းဖြေ။ WTE အတိုင်ပင်ခံများသည်သင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီသင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီနိုင်ပြီးသင်ထင်ထားသည့်အတိုင်းထက်မြန်သောသတိမမူမိသောအခွင့်အလမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏တန်ဖိုးကိုသင်မြင်နိုင်ပါသလား WTE နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းရှိအတိုင်ပင်ခံများ၊ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
နှင့် WTE အတိုင်ပင်ခံ
အခုအချိန်တွင်တစ် ဦး ညှိနှိုင်းမှုဇယား
သင်အချိန်ဖြုန်းချင်သောအချိန်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း WTE အကြံပေး?
သင်၏အချိန်ကိုမည်သို့ရယူနိုင်သနည်း WTE အတိုင်ပင်ခံဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှ?
တစ်နာရီတိုင်ပင်ဆွေးနွေး တစ်နေ့တာဆွေးနွေးတိုင်ပင် တနေ့လုံးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်း တစ်ပတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး တစ်လညှိနှိုင်းမှု တစ်နှစ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်